रुससँग डोनाल्ड ट्रम्पको सेक्स टेप ! | karnalikhabar.com
रुससँग डोनाल्ड ट्रम्पको सेक्स टेप ! – karnalikhabar.com
रुससँग डोनाल्ड ट्रम्पको सेक्स टेप !
अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईएले रुससँग अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक भन्दा बढी सेक्स टेप रहेको विश्वास गरेको खबरहरु आएको छ ।
र, यसकै आधारमा रुसले हृवाइट हाउस सम्हाल्ने तयारीमा रहेका ट्रम्पलाई ब्लाकमेलिङ गर्ने खतरा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति भए लगतै ट्रम्पले यसलाई झुटो समाचार भन्दै पटक पटक खण्डन गरेका छन् ।
तर, अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुमा लगातार यो खबर आइरहेको छ । पछिल्लो पटक बीबीसीका वासिङटन सम्वाददाता पल वेडले बोलेका छन् । उनका अनुसार सीआईएलाई लाग्छ कि रुससँग ट्रम्पको एक भन्दा बढी सेक्स टेप छन् । र, अमेरिकी चुनाव अघि नै एक संस्थाले आफूलाई सतर्क गराइएको थियो । तर, नदेखेकाले नपत्याएको उनले बताए ।
ट्रम्पले नोभेम्बर २०१३ मा मस्कोको यात्रा गरेका थिए । र, यो टेप त्यही बेलाको हुनसक्ने अनुमान छ ।
ट्रम्पका समर्थकहरुले भने यसलाई राजनीति प्रेरित आक्रमण भनेका छन् । स्वयंम ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सोधेका छन्, के हामी नाजी जर्मनीमा बसिरहेका छौं ?
उनले यो रोगी मानसिरकता भएको मानिसले लेखेको मेमो भएको र, यसमा बकवास कुरा मात्र रहेको बताए ।